Ndingathenga ihamburger eParis kwaye yinjongo yokongezwa, i-infro entle
izinja NOT umbala-iimfama.
Ubunokuthi wenze inqaku lakho ngaphandle kokubonisa ubudenge bakho ngokuthi izinja zithembele kwimvakalelo yazo yokujoja, ngaphezu kokubona, kwaye ke umbala wokutya kukwenza ukuba ukutya kubonakale kumhle ngakumbi kumthengi. Ndizama ukwenza uphando apha, kodwa Internet asiyondawo ilungileyo ukuba ekubeni nasiphi na isidenge isidenge unako ukubhala inqaku online.
Uphose inqaku leposti – ukutya kwenja akufakwa mbala wenja, kufakwa umbala kumntu okuthengayo. Ewe, izinja ziyakwazi ukubona ezinye imibala.
Ndiyathemba ukuba ngenye imini isimilo sakho siya kuhambelana namandla akho okubonelela ngezimvo eziluncedo.